लकडाउनकाे समयमा गर्भवतीले आफुलाई यसरी राख्नुस तन्दुरुस्त !–Samacharpati
लकडाउनकाे समयमा गर्भवतीले आफुलाई यसरी राख्नुस तन्दुरुस्त !
काठमान्डाैँ, ३ वैशाख । गर्भवतीहरुका लागि अहिले केही असहज परिस्थिती छ । गर्भावस्थामा केही शारीरिक समस्याहरु देखापर्छ ।गर्भवतीहरुका लागि अहिले केही असहज परिस्थिती छ । गर्भावस्थामा केही शारीरिक समस्याहरु देखापर्छ । घरमा बसिरहँदा कसरी गर्भवतीले आफुलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त राख्ने त ?
कुनै डर वा भय नराख्ने । कोरोना भाइरसका बारेका सामाग्रीहरु वा आतंकित हुने सामाग्रीहरु नहेर्ने । बरु ध्यान, प्राणायाम गर्ने । चलचित्र हेर्ने, पुस्तक पढ्ने । यसरी मनलाई आनन्दित र खुसी राख्ने ।
गर्भावस्था आफैमा एक संवेदनशिल अवस्था हो । यतिबेला सरसफाई, खानपान आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
चिकित्सकको सम्पर्कमा रहने
सकेसम्म आफुले जाँच गराइरहेका चिकित्सकको मोवाइल नम्बर लिनु जरुरी छ । अस्पताल धाउने काम नपरेको अवस्थामा फोनबाटै परामर्श लिनुपर्छ । आफुले जाँच गराइरहेका चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ । कुनैपनि किसिमको शारीरिक समस्या भए चिकित्सकलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संंक्रमणका कारण कतिपय परिवारले घरमा नै प्रसुती गराउने सोच बनाइरहेका होलान् । तर, यो त्यती सुरक्षित नहुन सक्छ । यसका लागि स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनैपर्छ । चिकित्सकको परामर्श बिना आफुखुसी घरमा नै प्रसुतीका लागि तयारी गर्नु त्यती उचित हुँदैन ।
के तपाईं खतरामा हुनुहुन्न ?
कोरोना भाइरसको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गर्भवती महिलाहरुमा विभिन्न किसिमको रोग र संक्रमण हुने सम्भावनो छ । गर्भावस्थाको क्रममा भ्रूणको रक्षा गर्नु पर्ने हुँदा शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वभाविक रुपले कम हुन्छ ।
त्यसैले गर्भवती महिलाहरुलाई संक्रमण हुने खतरा धेरै हुन्छ । यो समयमा आमा संक्रमित हुँदा यो संक्रमण भ्रुणमा स्थानान्तरित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भन्न अहिले कठिन छ । किनभने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित जुन महिला आमा बनेकी छन्, उनीहरुले जन्माएको शिशुको रिपोर्टमा कोभिड–१९ पोजेटिभ पाइएको छैन ।
सन्तुलित भोजन र फिटनेस
गर्भावस्थाको क्रममा तपाईंले आफ्नो भोजन र फिटनेसमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । तपाईंले जे खानु हुन्छ, त्यसले तपाईंको बच्चामा सीधा रुपमा प्रभावित गर्छ । त्यसैले तपाईंको खाना सन्तुलित र तरल पदार्थको मात्रा पनि सही हुनु आवश्यक छ । संक्रमणको खतराबाट बच्नका लागि र शारीरिक रुपले फिट रहनका लागि घर भित्रै हिंडडुल गर्नु पर्छ र आफ्नो गतिविधिको योजनाको बारेमा डाक्टरलाई जानकारी दिँदै गर्नु पर्छ ।
मिलाएर खाना जाने हाम्राे भान्साका मरमसलामै छ औषधिय गुण
जान्नुहाेस ! फसीको मुन्टाकाे सेवनले यस्ता खतरनाक रोगबाट मिल्छ छुटकारा
महिनावारी सुक्ने समयमा महिलामा देखिन्छन यस्ता लक्षण, के गर्नुपर्छ त यस्ताे समयमा !
मुटुलाई स्वस्थ राख्न गर्नुपर्छ यस्ताे कार्य
बिहान खालिपेट काँचो लसुन नियमित रुपमा खाँदा यस्ता समस्याबाट मिल्छ छुट्कारा
खोकी लाग्ने कफ जम्ने समस्याकाे लागि यस्ताे छ घरेलु उपाए !
कास्की र तनहुँमा सवारी दुर्घटनामा परि तीन जना घाईते
डेब्यु खेलमा लुकाकुको गोल
महोत्तरीमा सेनाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक महिलाको पाँच किलो ट्युमरको शल्यक्रिया